China Iron oxide black 722/750 abakhiqizi nabaphakeli | I-Shencai Pigment
I-Ferrosoferric oxide, Chemical Formula Fe 3 O 4. Yaziwa kakhulu ngokuthi i-iron oxide emnyama, amakristalu amnyama anamandla kazibuthe, yaziwa nangokuthi i-magnetic iron oxide. Le nto incibilika kwisisombululo se-asidi, ayincibiliki emanzini, i-Alkali Solution nama-solvents we-organic njenge-ethanol ne-ether. I-ferrosoferric oxide yemvelo ayixazululeki kwizisombululo ze-asidi futhi ihlangana kalula kalula ne-iron (III) oxide emoyeni ezimweni ezimanzi.
1. I-Ferrosoferric oxide yinto esetshenziswa kakhulu kazibuthe. Kusetshenziswe ngokukhethekile i-ferrosoferric oxide emsulwa njengezinto zokusetshenziswa zokuqopha amateyipu nemishini yokuxhumana ngocingo. Imagnetite yemvelo yinto eluhlaza yokwenza insimbi.
Kusetshenziselwa ukwenza ama-primers namabhantshi aphezulu.
Inzima kakhulu futhi ingasetshenziswa njengesiyaluyalu. Isetshenziswe kabanzi emkhakheni we-braking yezimoto, njenge: Ama-Brake pads, izicathulo zebhuleki njalonjalo.
I-Ferrosoferric oxide ibonakele emkhakheni wezinto zokushisela eChina, ngoba i-electrode, ukukhiqizwa kocingo kusesesigabeni sokuqala, amathemba emakethe abanzi kakhulu.
I-Ferrosoferric oxide nayo ingasetshenziswa njengezingulube nokupholisha. 3. Ukupakisha Komkhiqizo:
25 kg / isikhwama sephepha lesikebhe, i-25MT / 20FCL (i-Iron oxide Red);
Isikhwama sephepha esingu-25 kg / sezandla, i-12-14MT / 20'FCL (i-Iron oxide Yellow);
25 kg / isikhwama sephepha lesikebhe, 25MT / 20'FCL (Iron oxide Black)
25 kg / isikhwama sephepha lesikebhe, i-25MT / 20'FCL (i-Iron oxide green)
25 kg / isikhwama sephepha lesikebhe, i-25MT / 20'FCL (i-Iron oxide eluhlaza okwesibhakabhaka)
25 kg / isikhwama sephepha lesikebhe, 25MT / 20'FCL (Iron oxide Brown)
25 kg / isikhwama sephepha lesikebhe, 25MT / 20'FCL (Iron oxide orange)
1.emukela ukuhlolwa kwe-SGS, i-CCIC kanye nomunye umnyango wokuhlola wamazwe omhlaba.
Amasampula we-2.Free azothunyelwa kuwe.
Isipiliyoni seminyaka engu-3.14.
I-SHENMING ferric oxide inorganic color pigments, i-iron oxide red pigment emakethwa ngaphansi komkhiqizo womkhiqizo i- “SHENMING” ayatholakala ku-Red, Yellow, Black, Green, Brown, Orange, Blue.
“SHENMING” brand synthetic powder pigment iron oxide black 722 ithokozela idumela lemakethe eliphezulu futhi imikhiqizo ithengiswa kahle ezweni lonke.
Ukuhlolwa kweCCIC, CIQ, BV, SGS kwamukelekile, kanye nensizakalo yesampula yamahhala.
Eminyakeni yakamuva, isabelo sokuthekelisa esiseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, Middle East, South Asia, i-South America, i-Afrika, iRussia kanye neNingizimu Korea siyakhula futhi ikhwalithi yomkhiqizo nedumela lathola ukunconywa okuphezulu okungaguquki.
Uma unesithakazelo ekuthengeni ikhwalithi ephezulu yensimbi ye-pigment iron oxide emnyama 722 evela eChina, ISIJIAZHUANG SHENCAI IFENSI YOKUKHALA iyona oyikhethayo.
Sinesipiliyoni se-17years ku-pigments.Silungele ukukunikeza ikhwalithi ephezulu, insizakalo enhle kakhulu.
Igama Lokuhweba INSIMU OXIDE EMNYAMA
Ifomu lokulethwa Impuphu
Inkomba yombala I-pigment black 11 (77499)
I-CAS No./EC Cha 1317-61-9 / 215-277-5
Imininingwane Okuqukethwe (Fe3O4) % ≥95
Ukumuncwa kawoyela ml / 100g 15 ~ 25
Res. Ku-325 mesh % .50.5
Usawoti oncibilikayo wamanzi % .50.5
umswakama % .01.0
inani le-pH 5 ~ 8
Amandla adonsela phansi athile g / cm3 4.6
Amandla wokuthinta (kuqhathaniswa nokujwayelekile) % 95 ~ 105
Umehluko wombala ∆E (uma kuqhathaniswa nokujwayelekile) .01.0
Ukupakisha kokuthengisa Esikhwameni esingu-25kg / 1000kg esikhwameni ngobuningi bese sishaywe ngamalambu
Ezokuthutha nokugcina Vikela ukumelana nesimo sezulu / isitolo endaweni eyomile
Ukuphepha Umkhiqizo awuhlukaniswa njengobungozi ngaphansi kwe-EC 1907/2006 ne-EC 1272/2008
Langaphambilini iron oxide ophuzi 311/313/920
Olandelayo: I-iron oxide eluhlaza 5605/835
iron oxide ophuzi 311/313/920
iron oxide obomvu 110/120/130/180/190
I-iron oxide nsundu 600/610/663/686